Amagqabantshintshi NgeGeorgia​—Unqulo, Umhlaba, Abantu
Kuba mnandi kakhulu xa kuvunwa iidiliya
Ukuma komhlaba IGeorgia yaziwa ngeentaba zayo ezingoorhec’ izulu nezihlala zinekhephu, ezinye zide zibe nobude obuzimitha eziyi-4 500. Eli lizwe lahlulwe laziinxalenye ezimbini—impuma nentshona Georgia, ibe nxalenye nganye inemimandla, imozulu, amasiko, umculo, umdaniso, nokutya kwayo.
Abantu Abaninzi kubantu balapho abazizigidi eziyi-3.7 ngabohlanga lwalapho.
Unqulo Abantu abaninzi balapho bathi bahamba iCawa yobuOthodoki. Abamalunga ne-10 pesenti ngamaSilamsi.
Ulwimi Ulwimi lwaseGeorgia aluhlobenanga neelwimi zamazwe aselumelwaneni. Imbali ibonisa ukuba onobumba baseGeorgia benziwa ngaphambi kweXesha lethu Eliqhelekileyo.
Indlela Abantu Abazixhasa Ngayo Abantu abaninzi balapho baphila ngokulima. Kutshanje, ukukhenketha nako bekungenisa imali eninzi kweli lizwe.
Imozulu Impuma yeli lizwe inemozulu epholileyo. Unxweme loLwandle Olumnyama olusentshona Georgia, lunemozulu eshushu ehlotyeni ize iphole ebusika, ibe kukho intabalala yeziqhamo.
Ukuvunwa kweediliya kummandla waseKakheti
Ukutya EGeorgia ukutya asikokutya ngaphandle kwesonka. Isonka salapho sibhakwa kwioveni eyenziwe ngodongwe. Okona kutya kuthandwayo sisityu esingqumbululu esiqholiweyo size sityiwe namagqabi aluhlaza. Kudala ke bayenza iwayini. Iwayini iyayekwa itsale ize igcinwe kwimiphanda yodongwe. Iintsapho ezininzi zilima iidiliya zize zizenzele ngokwazo iwayini. IGeorgia ineentlobo eziyi-500 zeediliya.